Mogadishu Journal » Ciidamada Kenya oo wada howlgal ka dhan ah Al-shabaab
Mjournal :-Ciidamada Ammaanka dalka Kenya ayaa howlgallo culus waxa ay ka waddaan xadka Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan , waxaana howlgalladaasi lagu baadigoobaya dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab.
Sarkaal Sare oo ka tirsan Ciidamada Ammaanka dalka Kenya ayaa Warbaahinta u sheegay in howlgalkaan lagu xaqiijinaayo amaanka Xuduudka labada dal oo inta badan Al-Shabaab ay kasoo gudbaan,islamarkaana ay Weeraro ka geystaan Gudaha Kenya.
Waxaa uu sidoo kale sheegay intii howlgalka ay ku jireen in ay soo qabteen dhalinyaro lagu tuhmaayo in ay Shabaab xiriir laleeyihiin.
Ciidamada Ammaanka dalka Kenya ayaa bilihii lasoo dhaafay laba jibaaray howlgallada ay ka waddaan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Al-Shabaab ayaa Weeraro Khasaare badan dhaliyay ku qaaday dalka Kenya gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari, waxaana horraantii Bishaan Bandow lagu soo roggay degaano ka tirsan dalka kenya.